★မြန်မာ့အလင်း★: သတိ . . . မွတ်ဆလင်မ သတင်းကြေငြာနေသည်။ မျက်နှာကိုပဲကြိုးစား ကြည့်ပါ
သတိ . . . မွတ်ဆလင်မ သတင်းကြေငြာနေသည်။ မျက်နှာကိုပဲကြိုးစား ကြည့်ပါ
သူနာမည်က Laila Abid တဲ့။ အာရပ်လို Abid ရဲ့ အဓိပါယ်က Allahကို ရှိခိုးသူ (၀ါ) Allahကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်သူလို့ ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ Allahကို ရှိခိုးတဲ့ မိန်းမက မိန်းမပျက်ကြီးပါလား.. သတင်းကြေငြာတာ မျက်နှာနဲ့ အသံကပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မသိဘူးထင်တယ်နော်။ ကိုးကွယ်တဲ့ တမန်တော်ဆိုတာကလည်း မစင်စားတဲ့ ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ အကောင်ကြီးဖြစ်နေတာကိုး။ မဆိုးပါဘူးဗျာ။ ဘာသာဝင်နဲ့ ဘာသာခေါင်းဆောင် လိုက်ဖက်ညီပါတယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:51 PM